Deni wuxuu ugu baaqayaa hogaamiyayaasha DFS inay ka soo qayb galaan shirka
By axadle	 On Jan 3, 2021
Hogaamiye Cabdulaahi Siciid Deni DG Dowlad Goboleedka Puntland wuxuu si gaar ah ugu fashilmay saraakiisha doorashada taasoo qayb ka ah heshiiskii loogu yeeray shirka looga jawaabo.
Deni wuxuu sheegay in madaxweyne Maxamud Abdullahi Mohamed Roble & raiisul wasaare Mohammed Hussein ay doonayeen inay abaabulaan kulan looga hadlayo doorashooyinka looga hadlayo.
Wuxuu yiri xitaa hadii maamulka uu doonayo inuu martigaliyo ciyaarta inuu diyaar u yahay inuu raadiyo xalal ku guuldareysta kiiska lagugu daayay.
Kenya diyaar uma ahan inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya…
Askarta Israa’iil waxay toogasho ku dileen ilmo yar oo Falastiini ah!…
“Waxaan ka codsanayaa Hogaamiyaha JFS iyo Raysul Wasaaraha inay isugu yimaadaan isla shirkii lagu heshiiyay 17-kii September, hadii uu ka dhaco magaalada Garowe diyaar ayaan u nahay, hadii meel kale uu ka dhacayo ma iska indha tiri doono waxa socda. xamili ” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Deni.
Siciid Deni ayaa meesha ka saaray in xal loo helo rabshadaha, maadaama dalka uu soo maray dhibaatooyin kala duwan isla markaana la joogo waqtigii wadahadallada lagu dhameyn lahaa khilaafka sida uu hadalka u dhigay.
Ayuu yiri Hogaamiye Saciid “Ololaha iyo doorashadu waa af iyo sanaaduuq, laakiin yaan hubka la qaadan, ma haboona in rabshado la huriyo oo hubka waaweyn la iska dhigo, nin hadla lama dhaafi karo, dhanka hogaamiyayaasha waxaan leeyahay samee cidna ha ku qasbin. “Dalka iyo dadka tuur oo ha ku gaadhin.”.
Hogaamiyaha Puntland Siciid Deni ayaa shuruud ku xiray inuu soo gudbiyo guddiga doorashada 20/21, kadib markii uu fashil ku dhammaaday kulan uu ra’iisal wasaare Rooble kula yeeshay magaalada Garoowe 12-kii bishii Diseembar, 2020
axadle 6354 posts
Farriimaha qaar ayaa u baahan in dib loo dhigo
US drone hits Al-Shabaab radio station